VALAN’ARETINA :: Manodidina ny valo arivo ireo olona voan’ny kitrotro • AoRaha
VALAN’ARETINA Manodidina ny valo arivo ireo olona voan’ny kitrotro
Miparitaka. Manodidina ny valo arivo ankehitriny ireo olona voamarina fa voan’ny kitrotro manerana ny Nosy. Efa mahazo vahana any amin’ny distrika efapolo mahery izany.
Araka ny fantatra, noho ny tsirambina nataon’ ireo ray aman-dreny amin’ny tsy fanaovana vaksiny ny zaza mandritra ny fotoana tokony hanaovana izany no antony mbola mampirongatra ity aretina ity ankehitriny. Ankoatra izay , voalazan’ ny tompon’andraikitra ihany koa fa misy ireo olona mandefa zaza voan’ny kitrotro mandeha mianatra ka manaparitaka haingana ny aretina.
“Misy ireo dokotera milaza fa rehefa vita tsindrona ny zaza dia afaka miverina mianatra. Tsy marina anefa izany fa tsy tokony hamonjy sekoly, fiangonana, tsena ary tsy tokony handeha fitateram-bahoaka ireo olona voakasik’ity aretina ity mba tsy hamindra amin’ny olon-kafa”, hoy ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny minisitera, omaly.
Araka ny fanazavana hatrany, efa eo am-pitadiavana ny hevitra izay hamehezana ny aretina ny minisitera sy ny mpiara- miombon’antoka aminy ankehitriny. “Ao anatin’ny vahaolana ny fikarakarana ny vaksiny natokana ho an’ireo ankizy dimy taona no ho miakatra. Efa ato ho ato no hahatongavan’ izany ka ireo faritra tena ahitana ny aretina betsaka indrindra no hanombohana ny vaksiny. Anisan’izany ny eto Antananarivo, Toamasina, Ambatondrazaka sy Antsohihy ary ny maro hafa”, hoy hatrany ity tompon’andraikitra ity.
Tsiahivina fa tsy ny ankizy sy ny zaza irery fa maro be ihany koa ireo olon-dehibe no efa voan’ny kitrotro. Ny fanamafisana ny fiarovan-tena ihany no nambaran’ny tompon’andraikitra fa fomba hiatrehan’izy ireo ny aretina. Anisan’izany ny fihinanana sakafo sahaza, ampy torimaso sy ny maro hafa. Manamafy ihany koa ny tompon’ andraikitra fa mbola misy ireo vaksiny hiarovana amin’ity aretina ity ho an’ireo zaza latsaky ny herintaona eny amin’ireo tobim-pahasalamana sy ny toerana voatokana ho amin’izany.
FAHASALAMANA :: Distrika dimy no efa tsy ahitana ny tazomoka intsony